स्तन क्यान्सरविरुद्ध सचेतना फैलाउँदै मेलबर्नका दिदीबहिनी ! « MNTVONLINE.COM
स्तन क्यान्सरविरुद्ध सचेतना फैलाउँदै मेलबर्नका दिदीबहिनी !
परोपकारी कार्यमा अग्रणी दिदीबहिनी समाज भिक्टोरियाको टोलीले ब्रेष्ट स्क्रिन भिक्टोयिासँगको सहकार्यमा स्तन क्यान्सरविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । मुख्यत नेपालबाट अष्ट्रेलिया घुम्नका लागि आउनुभएका अभिभावकहरुलाई यस्तो सेवा प्रदान गरिएको हो । संस्थाकी अध्यक्ष जमुना पराजुलीले नेपालबाट अष्ट्रेलियामा आउनुभएका आमाहरुलाई निःशुल्क स्तन क्यान्सर परीक्षणका साथै कुनै समस्या देखिएको अवस्थामा थप उपचार समेतको व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
विभिन्न चार समूहमा विभाजित गरी ४४ जना आमाहरुको स्तन क्यान्सर परीक्षण गरिएको हो । स्थानीय ब्रोडमेडोज, ईपिंग, वैरेवी लगायतका ठाउँमा यस्तो परीक्षण सम्पन्न भएको छ । यसरी टिम विभाजन गरेर परीक्षणका लागि लैजाँदा आमाहरुलाई दिदीबहिनी समाजका सदस्यहरुले सहयोग गरेका थिए । उनीहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा परीक्षण सम्पनन भएको हो । पराजुलीले भनिन्, “आमाहरुलाई भाषाको समस्या नहोस् भनेर चिकित्सकहरुसँग दोभाषेको काम समेत उहाँहरुले गर्नुभयो । यति मात्र होइन, घर घरबाट आमाहरुलाई यातायातको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित परीक्षण केन्द्रसम्म लगिएको थियो । यस कार्यमा दुर्गा पराजुली, रीता पन्त, गीता पन्त, अन्जना नेपाल, शोभा पौडेल, वर्षा केसी र प्रभा श्रेष्ठले अगुवाई गरेका थिए ।”
परीक्षणपछि प्रतिक्रिया दिँदै अष्ट्रेलिया घुम्न आउनुभएका आमाहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा नियमित स्तन क्यान्सरको परीक्षण सुविधा छैन । यसैकारण रोग लागिसकेपछि मात्रै धेरैले थाहा पाउने गरेका छन् । तर, अष्ट्रेलियामा नियमित रुपमा हरेक वर्ष परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
दिदी बहिनी समाजले सेप्टेम्बर महिनामा स्तन क्यान्सरविरुद्धको सचेतना महिनाको रुपमा मनाउने र हरेक वर्ष यस किसिमको कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।